ORANGE SOLIDARITE DE MADAGASCAR: Sekolim-panjakana 30 samy hahazo « kit numérique » · déliremadagascar
CAN 2022 ATSY CAMEROUN: Lalao 51 handeha mivantana amin’ny Startimes
RAHARAHA VOLAMENA 49 KILAO: Mifanerasera mivantana amin’ny ministeran’ny fitsarana ao Comores fitondram-panjakana malagasy
SAMBO RENDRIKA TAO SOANIERANA IVONGO: Natao fanadihadiana ny tomponandraikitry ny APMF
TSY MAINTSY HIOVA NY GOVERNEMANTA : HO VOATAZONA HATRANY IREO TSY NAHOMBY
HAINGO PARADIS: Famahana haingana ny fiakaran’ny vidim-piainana sy ny delestazy no andrasana amin’i Prezida Andry Rajoelina
ORANGE SOLIDARITE DE MADAGASCAR: Sekolim-panjakana 30 samy hahazo « kit numérique »
Socio-eco	 23 novembre 2021 R Nirina
Nanavao ny fiarahamiasany amin’ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena (MEN) ny Orange Solidarité de Madagascar momba ny fandaharan’asa « écoles numériques”. Ny 23 novambra 2021 no niroso tamin’ny fifanaovan-tsoniam-piarahamiasa ny Ministry ny fanabeazam-pirenena Marie Michelle Sahondrarimalala sy ny filohan’ny Orange Solidarité de Madagascar, Benja Arson. Ho an’ny taona 2021-2022, miampy 30 isa ny sekolim-panjakana ho lasa sekoly nomerika. Samy hahazo « kit numérique » ny sekoly tsirairay. Ahitana Laptop 1 , tablettes 25, casques 25, serveurs Raspberry 2, vidéoprojecteur 1 miaraka amin’ny écran, Powerbank, multiprises io kit io ary efa ao anatin’ny serveurs ireo programa ampianarina ireo mpianatra. Hanome fiofanana ireo mpampianatra sy ny mpianatra amin’ny fampiasana ireo fitaovana ireo ny orinasa Orange Madagascar amin’ny alalan’ireo mpiasa mpilatsaka an-tsitrapo.
Mifanindran-dalana amin’ny politikan’ny MEN ity programa sekoly nomerika ity dia ny fametrahana ho laharam-pamehana ny fanabeazana mampiaty, ny fanabeazana tsara kalitao azo sitrahan’ny rehetra. « Amin’ny alalan’ny programa sekoly nomerika dia mandray ny andraikiny ny Orange amin’ny fampisitrahana ny olon-drehetra ny nomerika ; mandray anjara amin’ny fampihenana ny elanelana amin’ny fifehezana ny nomerika, amin’ny fanatsarana ny kalitaon’ny fampianarana ary fanampiana ny mpianatra rehetra hisitraka ny fanabeazana nomerika na aiza toerana misy azy na avy aiza ny fiarahamonina nipoirany », hoy ny tale jeneralin’ny Orange Madagascar, Frédéric Debord. Nanomboka ny taona 2014 no mankaty, tablettes 6.000 no notsinjaraina tamin’ny sekoly 157 manerana ny faritra 22.
CAN 2022 ATSY CAMEROUN: Lalao 51 handeha...
RAHARAHA VOLAMENA 49 KILAO: Mifanerasera...
FAHAMAIZANA TAO ANDEKALEKA: Heverina ho ...
SAMBO RENDRIKA TAO SOANIERANA IVONGO: Na...
TSY MAINTSY HIOVA NY GOVERNEMANTA : HO V...
HAINGO PARADIS: Famahana haingana ny fia...
RAFANOMEZANTSOA JEAN NIRINA: Tsy misy hi...
ORANGE SOLIDARITE: Fianakaviana sy ankiz...
VADIN’BEN’NY TANANA ALASORA SY N...
NOELY MIZARA FIFALIANA: Mpianatra 6000 n...
CAN 2022 ATSY CAMEROUN: Lalao 51 handeha mivantana amin’ny Startimes 8 janvier 2022
RAHARAHA VOLAMENA 49 KILAO: Mifanerasera mivantana amin’ny ministeran’ny fitsarana ao Comores fitondram-panjakana malagasy 8 janvier 2022
FAHAMAIZANA TAO ANDEKALEKA: Heverina ho “incendie criminel” 7 janvier 2022
SAMBO RENDRIKA TAO SOANIERANA IVONGO: Natao fanadihadiana ny tomponandraikitry ny APMF 6 janvier 2022
TSY MAINTSY HIOVA NY GOVERNEMANTA : HO VOATAZONA HATRANY IREO TSY NAHOMBY 4 janvier 2022
HAINGO PARADIS: Famahana haingana ny fiakaran’ny vidim-piainana sy ny delestazy no andrasana amin’i Prezida Andry Rajoelina 31 décembre 2021
RAFANOMEZANTSOA JEAN NIRINA: Tsy misy hifandraisany amin’ny resaka facebook ny fanadihadiana 31 décembre 2021